‘आज ठमेलको जात्रा जाने’ | .:: Welcome || Paryatannews
Home » :: हाईलाइट समाचार » ‘आज ठमेलको जात्रा जाने’
‘आज ठमेलको जात्रा जाने’
पर्यटनन्यूज, काटमाडौं । जात्रा ! धेरैका लागि प्यारो शब्द । जहाँ नाचगान हुन्छ, मीठा परिकार खान पाइन्छ, दिनमा भन्दा साँझ पर्दै गएपछि रौनकता बढ्दै जान्छ – मन भुल्छ । जात्रा जान रहर नहुने कमै होलान् । सानो छँदा मलाई पनि जात्रा जाने ठूलो रहर हुन्थ्यो । दाजुहरुले पढ्ने मान्छे जात्रा जान हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो; म जात्रा जानबाट बन्चित हुन्थें । एवंम् रितले म ठूलो भएँ तर गाउँमा जात्रा जाने चलन विस्तारै हराउन थाल्यो । जात्रा जाने धोको अधुरै रह्यो ।
काठमाडौंको मुट ठमेल । ठमेलको पनि मुटु चाक्सिबारी । चाक्सिबारीमा रहेको नेता प्रकाशमान सिंहको घरसँगै जोडिएको जात्रा क्याफे एण्ड बार । जसलाई छोटकरीमा ‘जात्रा’ भने पुग्छ । ‘लप्सीको फेदमा बसेर एक जोडी हुक्का तान्दैछन् । सँगै बाँसको झांग‘नेर गार्डेनमा विदेशीहरुको ठूलो ग्रुप कक्टेलमा रमाउँदै छन् । माथी ट्यारेसमा खै कोको हुन्, हाँसिमजाक गर्ने ठीटाठीटीहरुको ठूलै समूह छ । भित्र डाइनिङ रुममा पाहुना जस्ता देखिने भलाद्मी टोली खाना खाँदैछन् । म तलै गार्डेनको एउटा कुनोमा मसरुम सुप तान्दैछु । त्यही गार्डेनमा बनेको स्टेजमा लाइभ म्यूजिक चलिरहेको छ ।’ हैन, जात्रा भनेको यही हो जस्तो लाग्यो ।
‘साँझ पर्दै गएपछि यहाँ भीड बढ्दै जान्छ ।’ म भए नजिकै आएर जात्राका सञ्चालक कुमार डंगोलले सुनाए – ‘खाना पनि खान पाइने, ड्रिंक्स पनि गर्न पाइने । खानासँगै शान्त वातावरणमा म्यूजिकको अर्को टेष्ट हाम्रो विशेषता हो ।’ यहाँ नेपाली थाली सेटदेखि इन्डियन, कन्टिनेन्टल, नेवारी सबै प्रकारका खाना खान पाइन्छ । साँधेको सुकुटी यहाँ आउने धेरैको रोजाइ पर्छ, हाम्रो विशेषता पनि यही हो । सञ्चालक डंगोलले भने – ‘खाना त जहाँ पनि पाइन्छ, मुख्य कुरो वातावरण रहेछ । ग्रहाकलाई मन पर्ने वातावरण हामी कहाँ छ ।’
जात्रामा एकैसाथ १ सय १० जना अट्न सक्ने सिट क्षमता रहेछ । शान्त वातावरण, हाइजेनिक खाना, पार्किङ सुविधा, पारिवारिक वातावरण यहाँका विशेषता हुन् । सांगीतिक वातावरणमा मीठामीठा खानाका परिकारकार खान पाइने ठाउँ; आज त्यो बाल्यकालको जात्रा जाने धोको मेटेको छु ।
जात्रामा तीन स्पेशलः
१) बुधबार लेडिज नाइट – हरेक बुधबार लेडिज नाइट स्पेशल हुन्छ । जात्रामा जाने महिलाले कक्टेल वा मक्टेल निःशुल्क खान पाउँछन् । यस्तो अफर थाहा पाउनेहरु बुधबारलाई जात्रा जाने दिनको रुपमा लिन्छन् ।
२) ह्याप्पी आवर – जात्रामा ह्याप्पी आवर भनेर साँझ ५ देखि ७ बजेसम्मलाई भनिन्छ । यो समयमा कक्टेल वा मक्टेल एक किन्दा एक फ्रिमा दिइन्छ ।
३) वियर आवर – विहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मलाई वियर आवर भनिन्छ । यो समयमा वियर खानेहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २००० मा पकनाजोलमा एउटा सानो कफि पसल थियो । सोही ठाउँमा साइबर थियो, म्यूजिक रुम थियो अनि रिडिङ रुम पनि थियो । एउटै सञ्चालकले फोटो धुलाउने डार्क रुम पनि चलाएका थिए । एकै ठाउँमा धेरै सर्भिस र सधैं मान्छेहरुको भीड लाग्ने हुनाले कफि शपको नाम जात्रा राखियो । पछि पकनाजोलको ठाउँ अत्यन्तै साँघुरो भएपछि सन् २००३ मा ठमेलको चाक्सीबारीमा सारियो । आजको जात्रा क्यापे एण्ड बार त्यही जात्रा हो जहाँ सर्भिस राम्रो र गुणस्तरीय हुनाले मान्छेको भीड लाग्थ्यो । आजको जात्रामा अरु सेवा हटाइएको र खानाका विशेष परिकारहरु उपलब्ध गराउने गरिएको अर्का संचालक अरुण डंगोलले बताए ।
जात्रामा हरेक दिन बुधबार र शुक्रबार लाइभ म्यूजिकका साथ रम्न पाइन्छ । नाम चलेका र आवाज विकेका गायक÷गायिकाहरुले यहाँ अंग्रेजी, हिन्दी तथा नेपाली गीतहरु गाउँछन् । दर्शकको चाहना अनुरुपको गीत सुन्न पाइन्छ ।
‘आज ठमेलको जात्रा जाने’ Reviewed by Shiva Shrestha on Jan 04 . पर्यटनन्यूज, काटमाडौं । जात्रा ! धेरैका लागि प्यारो शब्द । जहाँ नाचगान हुन्छ, मीठा परिकार खान पाइन्छ, दिनमा भन्दा साँझ पर्दै गएपछि रौनकता बढ्दै जान्छ – मन भुल्छ पर्यटनन्यूज, काटमाडौं । जात्रा ! धेरैका लागि प्यारो शब्द । जहाँ नाचगान हुन्छ, मीठा परिकार खान पाइन्छ, दिनमा भन्दा साँझ पर्दै गएपछि रौनकता बढ्दै जान्छ – मन भुल्छ Rating: 0